Musharrax Madaxweyne Puntland Dr. Maxamed Salaad Qoryooley oo Shaaciyey Inuu U Tanaasulay Musharrax Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni.(Sawiro) – Radio Daljir
Musharrax Madaxweyne Puntland Dr. Maxamed Salaad Qoryooley oo Shaaciyey Inuu U Tanaasulay Musharrax Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni.(Sawiro)
Janaayo 6, 2019 2:43 g 0
Musharrax Madaxweyne Puntlan Siciid Cabdullaahi Deni iyo Musharrax Madaxweyne Maxamed Salaad Qoryooley ayaa shir jaraa’id ku qabtay guriga Musharrax Qoryooley uu ka degen yahay caasimadda Garoowe.
Musharrax Qoryooley ayaa si rasmi ah u shaaciyey inuu u tanaasulay Musharrax Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni, isla markaana uu awooddiisa oo dhan ku biirni doono qorshaha siyaasadeed ee Musharax Siciid Deni.
Qoryooley wuxuu caddeeyey in Musharrax Deni uu yahay masuulka kaliya ee ay isku siyaasad ka yihiin ama isu dhowyihiin horumarka iyo dib u habaynta ay Puntland mudan tahay in lagu sameeyo, bacdamaa ay dhibaato xoogan mudatay sanadihii u danbeeyey.
Musharrax Siciid Deni ayaa dhankiisa si weyn ugu mahad celiyay Maxamed Salaad Qoryeeley, isagoo tilmaamay inay ka wada shaqayn doonaan horumarinta Puntland, isla markaana mudane qoryooley oo qayb weyn ka ahaan doono Puntland meesha ay hayaanka u tahay.
Ololaha Doorashooyinka Puntland - Deni 2019 36 Wararka 20664
Maxay tahay sababta xukuumadda Farmaajo usoo faragalinayso doorashooyinka Puntland?
(Aragti): Waa kuma musharaxa ugu saamaynta badan ee baraha bulshada?